भ्याट मा कर प्रत्येक को शक्ति अन्तर्गत अब
कारण फरक भुक्तानी रसिद को ठूलो संख्यामा मानिसहरू भुक्तानी गर्न के र कहाँ ठीक बुझ्न सक्दैन। संघीय कर सेवा यो वास्तवमा प्रदान र INN लागि आफ्नो बेतलबी कर हेर्न सबै प्राकृतिक र कानुनी व्यक्ति मौका प्रदान गरेको छ। सबै जानकारी-लाइन प्रदान गरिएको छ, तपाईं मात्र एक विशेष वेबसाइटमा गएर आफ्नो व्यक्तिगत कर ID नम्बर प्रविष्ट पर्दैन। यो छ कि यो यसको आफ्नै खोजी गर्न सजिलो बनाउँछ धेरै सुविधाजनक सेवा हो , कर ऋण लाममा र आवश्यकतालाई हटाइ pester कर निरीक्षण। मुख्य कुरा - इन्टरनेटमा सजिला पहुँच।
भ्याट लागि कर सिक्न, तपाईं संघीय कर सेवा वेबसाइटमा "करदाता व्यक्तिगत खाता" प्रविष्ट गर्नुपर्छ, र आफैलाई बारेमा जानकारी प्रविष्ट गर्नुहोस्:
- थर, नाम, patronymic;
- व्यक्तिगत करदाता पहिचान नम्बर;
- निवास क्षेत्र।
व्यक्तिगत खाता सिर्जना भएपछि, तपाईंले कर मा सबै जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन्। व्यक्तिहरूलाई विशेष सञ्झ्यालमा एक ऋण छ भने भुक्तानी गर्न रकम प्रर्दशन गर्दछ। यसबाहेक, कार्यक्रम तपाईं सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ भुक्तानी आदेश, काम भुक्तानी गर्न बैंक जाने गर्नुपर्छ जो एक रसिद, जो। यो सिक्न कसरी गर्न सक्छन् र भ्याट मा कर, र तुरुन्तै भुक्तानी कागजात सिर्जना छ। कार्यक्रम सजिलै यो कार्य सामना गर्न सक्छन् पनि सबैभन्दा अनुभवहीन कम्प्युटर प्रयोगकर्ता प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ।
सेवा तपाईं सम्पत्ति, व्यक्तिगत उद्यमशीलता मा भ्याट मा परिवहन र भूमि बेतलबी कर, साथै कर सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। खैर, हामी रिपोर्ट त्रुटिहरू पत्ता लगाउन तयार हुनुपर्छ, त्यसैले यसलाई सबै दोह्राएर गर्न आवश्यक सधैं छ। कराधान को यस्तो सिस्टम यो जसबाट विरुद्ध लडाई को प्रभावकारिता वृद्धि, प्रयोग मा सजिलो प्रदान गर्दछ, करदाताओं लागि थप किफायती छ कर टालटुल।
एक महत्वपूर्ण ढिलाइ समस्याहरूको विभिन्न लागि अग्रणी देखि, तपाईंको कर चिन्ने INN धेरै महत्त्वपूर्ण छ मा: दैनिक दण्ड चार्ज, लक खाता विदेश यात्रा बाट निषेधित छन् छ। यस्तो समस्या चाहन्थे छैन, त्यसैले भुक्तानी गर्न सबै समय यदि तिनीहरूले बचा गर्न सकिन्छ।
INN सबै कर पहिचान पछि, तपाईं रुचि र पेनाल्टी सहित भुक्तानी गर्न सक्छन्। भुक्तानी बैंक स्थानान्तरण र नगद द्वारा सम्भव छ। पहिलो मामला मा, प्रणाली बैंक खाता र भुक्तानी टर्मिनल प्रयोग तिर्न प्रदान गर्दछ। साँचो, बैंकहरू सबै छैन, सूचीबद्ध हो, तर सबै भन्दा लोकप्रिय केही Sberbank र Promsvyazbank छन्।
यसलाई देखि रिपोर्ट को गठन को मिति आफ्नो प्रश्न को दिन संग एकै समयमा पर्नु सक्छ, अलिकति ठूलो रकम बनाउन राम्रो छ। सबै भुक्तानी रसिद भण्डारण र (कम्तीमा) तीन वर्ष disposed हुनुपर्छ। 10 दिन भुक्तानी पछि पछि, फेरि ऋण बारेमा जानकारी जाँच गर्नुहोस्। कुनै पनि अवस्थामा, विवाद को घटना मा भुक्तानी रसिद को रूप मा सबै जानकारी ऋण को निश्चय गरिदिने प्रमाण अभाव छ जो आफ्नो हात, मा हुनेछ।
विभिन्न कर regimes मा कर प्रतिवेदन आईपी को विशेषता?
आय कर - यो के हो? कसरी फर्कन?
र कसरी कहाँ कर ऋण पाउन?
तपाईं VAT को कर बकाया छ? त्यहाँ बोसो को payers एक सुविधाजनक सेवा छ
अचल सम्पत्ति खरीद लागि कर कटौती कसरी प्राप्त गर्न
कर लाभ को पेश्की लागि प्रक्रिया र अन्तिम म्याद
पत्रुस Bogdanovich - पुरानो कालो-र-सेतो फिलिम को एक adherent
उपन्यासमा एकजनाको छवि "युग्ने वन"
मिश्र Taba होटल, प्रजाति र स्थानीय Delights
बाल्यकाल देखि सलाम - साथ स्याउ घरेलु पनिर casserole
संकट को दोस्रो लहर
साबुन र टूथपेस्ट लागि स्वचालित औषधि
रूप मोडेल - को पोडियम लागि आवश्यक छ कि